China’s Supply Chain Woes Fan Concerns of Possible Drug Shortages | Myanmar Business Today
Home Business International China’s Supply Chain Woes Fan Concerns of Possible Drug Shortages
Chinese manufacturers and sellers of drug ingredients say logistical hurdles and labor shortages due to the coronavirus epidemic are delaying some production and shipments, adding to concerns about the potential for drug shortages globally as the virus spreads.
China accounts for only 13 percent of active pharmaceutical ingredient (API) makers supplying the U.S. market, according to the Food and Drug Administration. But it produces many APIs for widely used medicines as well as the chemicals used to formulate APIs, shipping them to India and elsewhere for processing into drugs.
Michael Ganio, director of pharmacy practice and quality at ASHP,aU.S. pharmacy industry association, said healthcare providers and pharmacists were monitoring information from drug.
“The impact of coronavirus on the pharmaceutical supply chain is concerning,” he said via email.
Although some Chinese factories said they were back to full capacity, several told Reuters they were operating at between 50 percent and 80 percent capacity.
Guy Villax, chief executive of Portuguese drug ingredient maker Hovione, said business plans could go awry if staff were absent due to self-quarantines or the need to look after parents or children whose schools are closed.
“If you have 30 percent of people missing in the plant, that’s going to have huge knock-on effects,” he said.
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲများ၊ အလုပ်သမားရှားပါးမှုဖြစ် ဖြစ်ပေါ်ကာ အချို့သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများနှင့် ပို့ဆောင်ရောင်းချမှုများ နှောင့်နေှးနေရကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံမှ ဆေးဝါးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ရောင်းချသူများက ပြောကြာသည်။ ထိုကဲ့သို့ နှောင့်နှေးခြင်းကြောင့် ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုး ပြန့်နှံ့နေစဥ်အတွင်းတွင် ဆေးဝါးရှားပါးမှုများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မည့် အနေအထားကို စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ဖြစ်လာစေသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့သည့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရောင်းချရေးအတွက် အဓိကနေရာတွင်ရှိသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ဆရာဝန်ညွှန်းသော ဆေးအများစုမှာ ၎င်းတို့က ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှာ အမေရိကန်ဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းချနေသည့် Active Pharmecutical Ingredient (API) ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူသည့် ကုမ္ပဏီများအနက် ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိကြောင်း အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှသိရသည်။ သို့သော် ဆေးများတွင် အများဆုံးသုံးသော API တော်တော်များများကို တရုတ်နိုင်ငံကထုတ်လုပ်သည်။ ထိုသို့ ထုတ်လုပ်ပြီးနောက် ယင်းတို့ကို ဆေးဝါးအတွင်း ထည့်သွင်း အသုံးပြုရန်အတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် အခြားဒေသများသို့ တင်ပို့ရောင်းချသည်။
ထိုအထဲတွင် ပဋိဇီဝဆေးများ၊ ibuprofenများ၊ acetaminophen များ၊ heparin များ၊ ပါဝင်သည်။
SOURCEAlexandra Harney (Reuters)
Previous articleAsia Pacific Airport Passenger Traffic Set to Plunge 24% in Q1
Next articleJapan’s Economy Shrinks Faster Than Estimated